Ciriiri Ha u Dooneyn inaad Adeysato! 4 Talo-siinta Xoog-saaridda Si Looga Horto Nidaamkaaga Laga Sameeyo Ransomware
Adduunku waxa uu wajahayaa ransomware halis ah maanta oo keenaya waxyaabo badan oo dhaqaale ah ee loo yaqaan "Windows Operating Systems". Fayruska loo yaqaan WannaCry wuxuu la xiriiraa 75,000 infekshanka PC ee adduunka oo idil. Waxay hayaan dhibbanayaasha bartilmaameedka madax-furashada iyagoo isticmaalaya sir-shiidka asymmetric ah. Weeraryahannadu waxay abuurayaan furayaal u gaar ah oo la heli karo oo kaliya marka la dejiyo dalabaadka.
Warar ku saabsan ammaanka internetka ayaa tilmaamaya in ay suurtogal tahay in la hubiyo xogta dijitaalka ah ee ka imanaysa ransomware, laakiin khabiirkii ugu horreeyay ee ka yimid Semalt , Oliver King, ayaa qeexaya tallaabooyinka qaarkood ee looga hortagi karo xakamaynta - vape temp.
1. Ka Fiiri Fiiri
WanaCry, oo kaliya sida fansamoyin badan oo gashan nidaamka isticmaalka iyo sidoo kale iyada oo loo marayo 'buufinta-n-duco' weerarta qulqulaya si ay u helaan qaabkooda nidaamka kombiyuutarka. Mashruuca 'spray-n-ducay' wuxuu ku lug leeyahay xeelad xumo ee farsamoyaqaannada ku jira emails spaming. Cinwaanka URL-yada lagu soo bandhigay waxay u oggolaaneysaa ransomware sugitaanka in uu dhex galo oo uu ku guuleysto kombiyuutarka.
Hanjabaadaha ay keenaan madax furashada ayaa ah mid aad u ballaaran oo sii kordhaya maalin kasta. Shakhsiyaadka iyo ururada isticmaalaya internetka waxay u baahan yihiin inay fiiriyaan..Xidhiidhada iyo faylasha la soo duubay waxaa ku jiri kara cabsi gelin hanjabaad ah sida WannaCry ransomware.
2. Dib u soo celinta Mawduuca
Dib u soo celinta macluumaadka ransomware waxay qabteen macluumaad ku saabsan kombiyuutarada. Kaydinta macluumaadka ku jira aaladaha kaydka badan ayaa bixin kara waxyeellada macluumaadka nacfiyada faafa. Doorashada qalabka kaydka ah ee loo isticmaalo dib u celinta waa inay tixgeliyaan amnigooda weerarrada viruska iyadoo kaydka daruurtu caadi ahaan u nugul yahay.
3. Ha siin lacag madax furasho
Ransomware ma aha mid lagu kalsoon yahay wadahadal. Bixinta madax furashada khidmooyinka waxay sii kordhinayaan suurtagalnimada inay mar kale ku soo celiyaan mar kale, ama waxay ku guul daraystaan ​​inay sii daayaan xogta xitaa ka dib bixinta lacag bixinta. Ransomware waxaa laga yaabaa inuu dib ugu noqdo qaddiyadaha madaxfurashada madaxfurasho dheeraad ah haddii dhibbanaha uu keeno dalabka.
4. Ku rakib Software Software
Software antivirus waxay gacan ka geysataa in lagu baadho nacnaca si aad u tirtirto oo nadiifiso nidaamka oo ka ilaaliso weerarada ka imaanaya ransomware. Iyadoo software-ka amniga ee lacagta bixiya ay bixiso difaac dhab ah oo kombiyuutarka ah, tijaabo tijaabo ah ayaa faa'iido leh marka loo baahan yahay nidaam lagu nadiifiyo nidaamka leh infekshanka ransomware. Si kastaba ha noqotee, qaybta la bixiyay ayaa fududeyn karta korjoogteynta iyo ka saarista xakamaynta xitaa iyada oo aan la dhexgalin user.
Kooxda Hacker-ka oo loo yaqaano Shadow Brokers waxay sii daayeen macluumaad ku saabsan madax furashada. Sida ay wada xidhiidhaan, WannaCry sidoo kale loo yaqaan Wcry ama Wanna waxay xiriir la leedahay sida ay u shaqeynayaan Hay'adda Nabadgelyada Qaranka. Waxay qaadatay karti luqado kala duwan leh oo lagu weerarayo alaabooyin kala duwan oo ku yaalla dalal badan oo kala duwan oo ku yaalla dalalka Spain, UK, iyo Jarmalka halkaas oo ay weerarto xarumaha dadweynaha sida isbitaalada, bangiyada, iyo saldhigyada xogta isgaarsiinta iyagoo dalbanaya madax-furasho inta u dhexeysa $ 300 iyo $ 600. Iska ilaali.